सप्तरी । जिल्लाको अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिका–२ स्थित रामटोलमा गए राति जङ्गली हात्तीले चार घर तोडफोड गरेको छ । तीन हात्तीको एकैपटक गाउँ प्रवेश गरी वीरेन्द्र राम, श्यामकुमार राम, नारायण राम र लक्ष्म...
एक करोड १० लाख भारतीय रुपैयाँ बरामद
काठमाडौं । नेपाल भित्राउँदै गरेको खाली कन्टेर चेकजाँच गर्दा एक करोड १० लाख भारतीय रुपैयाँ बरामद भएको छ । मंगलबार विराटनगर भन्सारबाट सशस्त्र प्रहरीले एक करोडभन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ बरामद गरेको हो । ‘...
विप्लपका केन्द्रिय सदस्य शर्मा पक्राउ
काठमाडौं । प्रतिबन्धीत नेत्र विक्रम चन्द समूहका केन्द्रिय सदस्य अनिल शर्मा पक्राउ परेका छन । प्रहरीको विशेष टोलीले उनलाई चितवनबाट पक्राउ गरेको हो । शर्मा यस अघि पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्य र पूर्वी कमा...
संघीय संसदका नवनियुक्त महासचिव गौतमद्वारा सपथ ग्रहण
काठमाडौं । संघीय संसदमा नवनियुक्त महासचिव डा. भरत गौतमले पद तथा गोपनियाताको सपथ ग्रहण लिएका छन । नवनियुक्त महासचिव गौतमलाई संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पद तथा गोपनियताक...
नेकपा अध्यक्षद्वय ओली- प्रचण्डबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा २४ गतेका ला...
बाँकेमा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप
काठमाडौं । नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकमा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको छ । नेपालगन्जमा कोरोना संक्रमितहरु बढेपछि मंगलबार दिउसोबाट सिल गर्ने निर्णय गरेको थियो । लकडाउन अवज्ञा गरेको भन्दै प्रहरीले स्थानी...
कर्णाली प्रदेश एक हप्ताका लागि सिल गर्ने निर्णय
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका संक्रमितहरु बढ्दै गइरहेका छन । केहि समय यता प्रदेश नम्बर ५ बाँकेको नेपालगज्जमा कोरोना संक्रमित बढदै गएपछि कर्णाली प्रदेशले प्रदेशभर साबधानी अपनाएको छ । ...
पार्टीमा रडाको मच्चाउने योजनामा फेरि को लाग्दै छ ? : प्रवक्ता श्रेष्ठ
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपा पार्टी विरुद्ध भ्रामक समाचार प्रकाशित भइरहेको बताएका छन् । प्रवक्ता श्रेष्ठले मङ्गलवार ट्व...
पर्वत । सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनका बेला महिलामाथि हातपात गरेको आरोपमा पर्वतका १ शिक्षकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।दक्षिण पर्वतको पैँयु गाउँपालिका–२ त्रिवेणीका स्थानीय शिक्षक खगेन्द्र रानालाई प्रहर...
आमाको मृत्यु, बुबा बेपत्ता, छोराछोरीको बिचल्ली
आफूलाई लालनपालन गर्दै आएकी आमाको मृत्यु भएसँगै डोटीको सायल गाउँपालिका–२ लुसाकोटका ३ बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ । ५ वर्ष पहिले रोजगारीका लागि भारत गएका बुबा शेरबहादुर थापा उतै बेपत्ता भएपछि ९ वर्षीय क...
नेपालगन्ज । कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ८२ पुगेको छ । आज १ बालिकासहित थप ७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा भएको पीसीआर परीक्षणमा ३ पुरुष, ३ महिला र ...